सहकारीको अवधारण (co-operative concept)
 सहकारीको परिभाषा र भनाईहरु ः
सहकारी भनेको सरल भाषामा मिलेर काम गर्नु भन्ने बुझिन्छ । तर सबै मिलेर गरेको सबै कार्यलाई सहकारिताका आधारमा भएको सहकार्य भन्न मिल्दैन । सहकारी हुनलाइ सहकार्यमा सबैकोे उद्देश्य एक हुनु पर्छ । उद्देश्य एकै हुनलाई पेशागत समानता, पूँजीगत समानता, सोचाई र दृष्टिकोणमा समानता जस्ता पक्षहरू महत्वपूर्ण मानिन्छन् ।
 अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघले १९९५ मा परिभाषित गरे अनुसार
सहकारी संस्था संयुक्त स्वामित्व र प्रजातान्त्रिक नियन्त्रणमा रहने ब्यवसायमार्फत आफ्ना साझा आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक आवश्यकता र आकाँक्षा पूर्ति गर्न स्वेच्छाले संगठित भएका ब्यक्तिहरुको स्वायत्त संस्था हो ।
सहकारीको सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघले १९९५ मा परिभाषित गरे अनुसार –"A Cooperative is an autonomous association of persons united voluntarily to get their common economic, social & cultural needs and aspirations throughajointly owned and democratically controlled enterprise."
 संयुक्त राष्ट्र संघ
सहकारी ब्यवसायले सुन्दर विश्व निर्माण गर्दछ । (सन् २०१२ को अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्षको सहकारीको नारा रुपमा)
 पुलिन ग्रिन आईसिए –अध्यक्ष
सहकारी सामाजिक, आर्थिक विकासको बैकल्पिक मोडल होईन, उत्कृष्ठ मोडल हो ।
 बृहत नेपाली शब्दकोष
ए क. साथ मिलेर काम गर्ने, साथ साथै काम गर्ने सहयोगी साथी ।
य सहकारीको उत्पत्ति, विकास, ईतिहास तथा घटनाक्रम
 सन् १७८९ मा फ्रन्सेली राज्यक्रान्ति शुरु, आन्दोलन सामन्ति उत्पादन सम्वध विरुद्ध केन्द्रित
 वेलायतका समाज सुधारक रवर्ट ओयनबाट औपचारिक रुपमा आधुनिक सहकारीको प्रारम्भ सर्वप्रथम सन् १८४४ मा कपडा कारखानामा काम गर्ने २८ जना मज्दुरले उपभाक्ता सहकारी भण्डारको स्थापना ।
 The Rochadle Equitable Pioneer Society रोचडेल समतामुलक अग्रणी संस्थाको नामबाट उपभोक्ता सहकारी भण्डारको स्थापना ।
 सन् १८४९ मा जर्मनमा हर्मन शुल्जले बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सहकारी प्रकृतिको संस्था गठन र सञ्चालन
 सन् १८७९ मा जापानमा उपभोक्ता सहकारी स्थापना
 सन् १८८२ मा डेनमार्कमा दुग्ध सहकारी स्थापना
 सन् १८९५ को ९ अगष्टमा लण्डनमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघ (ICA) को स्थापना भएको हो
 सन् १८९६ मा आई.सी.ए द्धारा राजनीतिक तटस्थता रहने निर्णय ।
 सन् १९०४ मा भारतमा ऋण सहकारी ऐन जारी ।
 सन् १९२२ मा अन्तर्राष्ट्रिय बैकिङ्ग विभाग गठन ।
 सन् १९२३ मा प्रथम आई.सी.ए सहकारी दिवश सम्पन्न ।
 सन् १९३४ मा आई.सी.ए द्धारा सहकारी सिद्धान्त अनुमोदन ।
 सन् १९६६ मा सहकारी सिद्धान्तको दोश्रो पटक संसोधन ।
 सन् १९६८ मा भारतको नयाँ दिल्लीमा आई.सी.ए को एसिया प्रसान्त क्षेत्रको क्षेत्रीय कार्यालय स्थापना ।
 सन् १९८२ मा आई.सी.ए को केन्द्रिय कार्यालय लण्डनबाट स्वीजरल्याण्डको जेनेभामा स्थान्तरण ।
 सन् १९९२ मा चीनमा आधुनिक कृषि सहकारी
 जापान, ईजरायल र भारतको कृषि सहकारीको विकास व्यापकता
 सन १९९५ मा सहकारीको सिद्धान्तमा समुदाय प्रति चासो भन्ने बुँदा थप, संयुक्त राष्ट्रसंघ द्धारा प्रथम यु.एन सहकारी दिन UN First Cooperative dayमनाउने घोषणा ।
 सन् २००९ मा संयुक्त राष्ट्रसंघ द्धारा सन् २०१२ लाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्षको रुपमा मनाउने घोषणा ।
 सन् २०११ मा मेक्सीकोमा सम्पन्न आई.सी.ए को साधारण सभाबाट सन २०१२ लाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्षको विधिवत प्रारम्भ भएको घोषणा
 ICAमा सन 20 February 2012सम्म ९१ देशका २४५ राष्ट्रि«य स्तरका संघ संस्थाहरु आबध्द भईसकेका छन ।
 ICAको प्रधान कार्यालय ः स्वीजरल्याण्डको जेनेभा
 क्षेत्रीय कार्यालय ४ वटा
 एशिया तथा प्रशान्तक्षत्रको कार्यालय भारतको नयां दिल्लीमा
 हाल विश्वभर १ अर्व भन्दा वढि मानिसहरु सहकारी संस्थाको सदस्य वनिसकेका छन ।
 विश्वमा सहकारीले १० करोड भन्दा वढि व्यक्तिलाई रोजगारी दिएको छ,जुन बहुराष्ट्रिय कम्पनिको भन्दा २०५ बढि हो ।
 वि.सं.२००० मा तत्कालिन राणा सरकारका मेजर जनरल विजयले सरदार भिमबहादुर पाँडेलाई पत्र लेखि औधोगिक तथा सहकारी सम्भाब्यता बारे अध्ययन गर्न निर्देशन दिएको पाईएको ।
 वि.सं.२०१० मा योजना विकास तथा कृषि मन्त्रालयको मातहतमा सहकारी विभागको स्थापना ।
 वि.सं.२०१३ सालमा चितवनको बखानपुरमा बचत ऋण सहकारीको गठन ।
 वि.सं.२०१६ सालमा पहिलो सहकारी संस्था ऐन जारी ।
 वि.सं.२०१८मा सहकारी संस्था नियम २०१८ जारी ।
 वि.सं.२०१८ मा सहकारी विकास कोषको स्थापना ।
 वि.सं.२०१८ मा साझा संस्था लिमिटेडको स्थापना ।
 वि.सं.२०१९ मा सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना ।
 वि.सं. २०१९मा सहकारी बैंक ऐन २०१९ जारी ।
 वि.सं.२०२० मा सहकारी बैंक स्थापना ।
 वि.सं.२०२४ मा सहकारी बैंकलाई कृषि विकास बैंकमा परिणत गरेको ।
 वि.सं.२०२६ मा सहकारी विभागलाई भूमिसुधार मन्त्रालय मातहतमा राखिएको ।
 वि.सं.२०२७ मा सहकारी संस्था ऐन २०१६ मा दोश्रो संसोधन ।
 वि.सं.२०४१ मा साझा संंस्था ऐन २०४१ जारी ।
 वि.सं.२०४९ मा सालमा सहकारी ऐन २०४८ जारी ।
 वि.सं.२०५० मा सहकारी संस्था नियमावली २०४९ जारी ।
 वि.सं.२०५० मा राष्ट्रि«य सहकारी संघको गठन ।
 वि.स २०५४ मा नेपालले आइ.सि ए को सदस्यता प्राप्त गरेको ।
 वि.सं.२०६० मा सहकारी संघ संस्था र नेपाल सरकारको संयुक्त लगानीमा राष्ट्रिय सहकारी बैंकको स्थापना ।
 वि.सं.२०६४ मा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा सहकारी अर्थतन्त्रलाई मान्यता प्रधान ।
 वि.सं.२०६८ मा आ.व ०६८÷०६९को वजेटमा सहकारीलाई ३ खम्वे अर्थनीति अनुसार विशेष प्राथमिकता ।
 वि.सं.२०६८ मा नेपाल सरकारद्धारा सन् २०१२ लाई संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणा वमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्षको रुपमा मनाउन कृषि तथा सहकारी मन्त्रीको संयोजकत्वमा मूल समारोह समिति गठन ।
 २०४८ साल अगाडि सम्म नेपाल अधिराज्यभर ८३० वटा सहकारी संघ÷संस्थाहरु सञ्चालित रहेका थिए । वि.सं २०४८ साल पछि सहकारी ऐन २०४८ एवम् सहकारी नियमावलि २०४९ जारी भयो । यस पश्चात सहकारी संघ संस्थाहरुलाई स्वायत्तता प्रदान र समुदाय बाटै स्वःस्फुर्तरुपमा सहकारी संस्था गठन र सञ्चालन गर्न सकिने ब्यवस्था गरेको छ । २०४८ साल पछि विभिन्न प्रकृतिका सहकारी संघ संस्थाहरुको गठन र सञ्चालनमा तिव्रता आई २०६९ साल आषाढ मसान्त सम्म प्रारम्भिक सहकारी सहकारी संस्थाहरुको संख्या २६५०१ पुगेको छ । सहकारीका मुल्यहरु
१) आधार मूल्यहरु (Basic values)
२) नैतिक मूल्यहरु (Ethical Values)
 आधार मूल्यहरु (Basic values)सहकारी संस्थासंग आधारित मूल्य जसले सहकारी संस्था र सदस्यहरु वीचको सम्वन्ध स्थापित गर्दछ । आधार मूल्यले सहकारी संस्थाको जगको रुपमा काम गर्दछ ।
१) आत्मसहयोग÷स्वबलम्वन (Self Help)वास्तवमा कोही पनि आफैंमा पूर्ण हुदैन अरुको भर पनि पर्नुपर्ने हुन्छ । तर सहकारीको यस मूल्यले आफ्नो लागि आफैले काम गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ । अरुले सहयोग गरिदेलान भन्ने सोचले सहकारी संस्था स्थापना गरिदैन ।
२) स्व–उत्तरदायित्व (Self-Responsibility)सहकारी संस्थामा जिम्मेवारी र स्व उत्तरदायि सहकारी संस्थाका सदस्यहरुले नै लिनु पर्दछ । सदस्यद्धारा नै नियन्त्रीत तथा सम्पूर्ण क्रियाकलापहरुको जिम्मा सदस्यहरुद्धारा नै लिईने हुंदा यसमा स्व उत्तरदायित्वको भावना अधिक रहन्छ ।
३) प्रजातन्त्र (Democracy) ः संस्थाका सबै सदस्यहरु समान हुन्छन । सबैलाई आफ्नो विचार अभिब्यक्ति गर्ने स्वतन्त्रता हुन्छ । सहकारी संस्थामा एक व्यक्ति एक मतको सिद्धान्तले काम गर्दछ । सदस्यहरुद्धारा गठित सञ्चालन समितिबाट नै सहकारी संस्था सञ्चालन हुने भएकाले सदस्यहरुको प्रत्यक्ष सहभागिता रहन्छ ।
४) समानता (Equality) ः सहकारी संस्था समानताको भावनाबाट पेरित हुन्छ । विभेदपूर्ण ब्यवहार सदस्यहरुमा गरिदैन । आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, लैङ्गिक ,राजनीतिक, धार्मिक , जात भात , वर्ण आदिका आधारमा भेदभाब गरिदैन ।
५) न्याय (Justice) ः सहकारी संस्थामा सदस्यहरुको योगदानको आधारमा आर्थिक प्रतिफलको न्यायोचित वितरण हुन्छ । सबै सदस्यहरुलाई समान रुपमा प्रतिफल वितरण नगरिकन सदस्यको ब्यवसायिक कारोवारको आधारमा न्याय पूर्ण तवरले प्रतिफलको वितरण गरिन्छ । एउटा सदस्यलाई न्याय गर्दा अर्को सदस्य अन्यायमा पर्दैन ।
६) ऐक्यवद्धता (Solidarity) ः सहकारी संस्थाका सदस्यहरु आफ्ना साझा आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक आवश्यकता र आकाँक्षा पूर्ति गर्न स्वेच्छाले संगठित भई ऐक्यवद्ध भएका हुन्छन । एकतामा वल हुन्छ भन्ने विश्वास राख्दछन ।
 नैतिक मूल्यहरु (Ethical Values)ः सहकारीको नैतिक मूल्यले सहकारी संघ÷संस्था र समाज बीचको सम्बन्धमा पुलको काम गर्दछ ।
१) ईमान्दारिता (Honesty) ःसहकारी संस्थामा सदस्य–सदस्य बीच पारदर्शिता हुन्छ । आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारी संस्थाका सबैले इमान्दारिता पूर्वक निर्वाह गर्दछन । छल कपटले स्थान पाउदैन भन्ने विश्वास राखिन्छ ।
२) खुला पन (Openness) ः सहकारी संस्थामा सदस्य बन्नका लागि कर काप गरिदैन र सदस्यता त्याग गर्नका लागि पनि बार बन्देज लगाईदैन । संस्थाबाट उपलब्ध सेवा उपयोग गर्न सबैलाई खुला वातावरण सृजना गरिन्छ । आर्थिक तथा प्रशासनिक कारोवारमा खुलापन रहन्छ । संस्थाको अवस्था र गतिविधिहरु सदस्य र सरोकारबालाले सजिले देख्न र प्राप्त गर्न सकिने ब्यवस्था गरिएको हुन्छ ।
३) सामाजिक उत्तरदायित्व (Social Responsibilities)ः सहकारी संस्था समुदायमा आधारित हुन्छन । सहकारी संस्था समाजमानै स्थापना गरिने भएकाले यसका क्रियाकलापबाट समाजलाई हानी नोक्सानी नभई फाईदा पुग्दछ भन्ने मान्यता रहि आएको छ । तसर्थ सहकारी संस्थाले समुदायको समग्र विकास र वातावरणीय पक्षमा सचेत भई सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा गर्दछन ।
४) अरुको हेरचाह (Caring for Other)ः सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यको हितमा मात्र कार्य नगरी गैर सदस्य तथा समुदायको हितको लागि पनि काम गर्दछन् । बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, पछाडि परेको वर्ग, समुदाय र फरक क्षमता भएका समाजका सदस्यको लागि पनि सहकारी संस्थाले ध्यान लिनु पर्दछ ।
 सहकारीका सिद्धान्तहरु
१) स्वैच्छिक तथा खुला सदस्यता (Voluntary and Open Membership)
सहकारी संस्था स्वैच्छिक रुपमा संगठित हुने सदस्यहरुको संगठन हो । संस्थाबाट उपलब्ध हुने सेवा उपयोग गर्न संस्था मार्फत सदस्य तथा समुदायलाई योगदान गर्न र सदस्यको जिम्मेबारी बहन गर्न चाहने सबैका लागि सदस्यता खुला रहन्छ ।
 सदस्य बन्नका लागि कर काप गरिनु तथा लोभ लालच देखाईनु हुदैन ।
 सदस्य बन्नको लागि अनुचित प्राबधान खाख्न हुदैन ।
 सदस्यता त्याग गर्न अनावश्यक बार बन्देज लगाईन नहुने ।
 संस्थाबाट उपलब्ध सेवा उपयोग गर्न सक्ने सबैलाई खुला गरिनु पर्ने ।
 सबै सदस्यहरु जिम्मेबारी लिन तयार हुनु पर्दछ ।
 जिम्मेवारी लिनमा निस्कृय हुने, अरुको आग्रह टार्न र सदस्यताको लागि मात्र सदस्य बन्नु हुदैन ।
 सदस्यता तथा अन्य कार्यहरुमा आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, लैङ्गिक, राजनीतिक, धार्मिक ,जात भात , वर्ण आदिका आधारमा भेदभाब गरिनु हुदैन ।
 ब्यक्तिको स्वतन्त्र निर्णयबाट सदस्य बन्ने बा नबन्ने. निक्र्यैल गरिनु पर्दछ ।
 अरुको दवाव र प्रभावको कारण सदस्य बन्ने बनाईने कार्य गरिनु हुदैन ।
 सदस्यता संस्थाको ब्यवसायिक कारोवार तथा उद्देश्यको सिमा सम्म आवश्यक हुनुपर्दछ ।
२) सदस्यहरुको प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण (Democratic Member Control)
सहकारी संस्थाहरु आफ्ना सदस्यहरुद्धारा नियन्त्रिक प्रजातान्त्रिक संगठन हुन । यी संस्थाका सदस्यहरु आफ्नो संस्थाको नीति तय गर्न र निर्णय गर्ने कार्यमा सक्रिय रुपमा सहभागि हुन्छन । एक ब्यक्ति एक मतको आधारमा सदस्यहरुको समान अधिकार रहन्छ ।
 सहकारीमा सदस्यहरुनै शक्तिका स्रोत हुन ।
 संस्थाको साधारण सभाबाट पारित प्रकृया, नियम अनुसार कार्य हुनु पर्दछ ।
 सेवा उपभोेगकर्ताहरुको रुपमा सदस्यहरुले निर्णय गर्न पाउनु पर्दछ ,थोपरिनु हुदैन ।
 नियन्त्रण गर्ने अधिकार अन्तत् साधारण सभामा हुनु पर्दछ ।
 सञ्चालक समितिमा चुनिने र चुन्ने अधिकार एक ब्यक्ति एक मतका आधारमा हुनु पर्दछ, पूँजिको आधारमा हुनु हुदैन ।
 बैद्यानिक तथा प्रजातान्त्रिक निर्वाचन प्रणालीवाट सञ्चालकहरुको छनौट गरिने ब्यवस्था हुनु पर्दछ ।
 निर्बाचित प्रतिनिधिहरुले साधारण सभाले प्रदान गरेको अधिकारका आधारमा निर्णय गर्ने तथा अन्य सम्पूर्ण कार्य गर्नु पर्दछ ,कुनै सदस्य, समुह वा बाह्यि हस्तक्षेपका आधारमा गर्नु हुदैन ।
 साधारण सभा प्रति निर्बाचित सबै प्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरु उत्तरदायि हुनु पर्दछ ।
 आकस्मिक रुपमा संस्थाको भलोका लागि गरिएका कार्यहरु साधारण सभाबाट अनुमोदन गरिनु पर्दछ ।
 संस्थाका सबै काम कारवाहिमा पारदर्शिता कायम हुनु पर्दछ ।
३) सदस्यहरुको आर्थिक सहभागिता ( Member Economic Participation)
सहकारी संस्थाका सदस्यहरु आफ्नो संस्थाको लागि आबश्यक पूँजी निर्माणमा आर्फै सहभागि हुन्छन । संस्थाको पूँजिमाथि प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण राख्दछन । कम्तिमा यस पूँजिको केहि भाग सहकारी संस्थाको साझा सम्पत्ति हुन्छ ।
 सहकारीको ब्यवसाय सञ्चालन गर्न सदस्यहरुबाट लगानीहुनु पर्ने ।
 संस्थाको पूँजी निर्माणको प्रमूख आधार सदस्यहरुको योगदानबाट नै हुन्छ ।
 पूँजी संकलन, परिचालन र वितरणमा सदस्यहरुको नियन्त्रण हुने ।
 लाभांस र संरक्षित पूँजी कोषको वितरण सदस्यहरुको योगदानको आधारमा गरिने ।
 जगेडा कोष जुन संस्थागत विकासमा उपयोग गरिने ।
 विभिन्न अन्य कोष जुन सदस्यहरुको निर्णय अनुसार सदस्य, संस्था र सामाजिक हितका लागि परिचालन गरिने ।
 प्रत्येक सदस्यले संस्थाको उत्पादन, आपूर्तिकर्ता र उपभोक्ताको रुपमा हैसियत राख्ने
 नाफा कम, संस्थाको दिगो विकास (संस्थागत ब्यवसाय) गर्न तर्फ पूँजी परिचालन गरिने ।
 संस्था धनी हुने तर्फ भन्दा सदस्यहरुको अवस्थामा सुधार गर्न तर्फ ध्यान दिनु पर्ने ।
४) स्वायत्तता र स्वतन्त्र (Autonomy and Independence)
सहकारी संस्थाहरु आफ्ना सदस्यहरुद्धारा नियन्त्रित स्वायत्त तथा स्वतन्त्र हुन्छन । संस्थागत सुशासनका लागि नीति निर्माण गर्न स्वायत्त र कार्यान्वयन गर्न स्वतन्त्र हुन्छन ।
 सदस्यहरुद्धारा नियन्त्रित, स्वतन्त्रर आत्म सहयोगि संगठनको रुपमा सहकारी संस्थाहरु सञ्चालित हुने ।
 आफ्नो लागि शासन गर्ने नियम, विनियम, प्रचलित कानुन अन्तरगत रहि बनाउन सहकारी संस्थाहरु स्वायत्त हुन्छन ।
 निर्वाचित प्रतिनिधिहरु विभिन्न कारोबार, पूँजी सृजना ,परिचालन तथा लेन देनको निर्णय गर्न स्वायत्त र स्वतन्त्र हुने ।
 आन्तरिक स्रोत परिचालनमा जोड, आर्थिक आत्म निर्भरता बढाई परनिर्भरता हटाउन प्रयास गर्ने
 संस्थाले सदस्य र संस्थाका हितका खातिर ब्यक्तिको सरह कानुनी अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने ।
 सरकारले सहकारी कानुन अनुसार मात्र नियन्त्रण गर्ने
 सहकारी कानुन भित्र गरिने संस्थाको निर्णय अन्तिम निर्णय हुने ।
५) शिक्षा, तालिम तथा सूचना (Education, Training and Information )
सहकारी संस्थाले आफ्नो विकासका लागि प्रभावकारी योगदानमा सहयोग पु¥याउने हिसावले संस्थाका पदाधिकारीहरु, , सदस्यहरु ,कर्मचारी तथा सहकारीकर्मीहरुलाई सहकारी शिक्षा तथा तालिम उपलब्ध गराउँदछन ।
 सांगठनिक, ब्यवसायिक र सामाजिक स्तर बढाउन सहकारी शिक्षा तथा तालिम कार्यव्रmमहरु सञ्चालक एवम् सदस्य र कर्मचारी बीचमा निरन्तर सञ्चालन गरिनु पर्ने ।
 समसामयिक रुपमा भएका परिवर्तन सम्बन्धी सूचनाको निरन्तर सदस्यहरु बीच आदान प्रदान गर्नु पर्ने ।
 ब्यवस्थापन प्रणालीका नविन अवधारणा अनुसार संस्थाको ब्यवस्थापन सम्विन्धि तालिमहरु सञ्चालन गरिनु पर्ने ।
 कर्मचारी, प्रवन्धकलाई ब्यवसायिक तथा अन्य कार्य विशेषको तालिम प्रदान गरिनु पर्ने ।
 सदस्यहरुलाई ब्यवसायिक प्रविधि, नेतृत्व विकास तथा उद्यमशिलता सम्बन्धी शिक्षा, तालिम र सूचना प्रदान गरिनु पर्ने ।
 युवा नेता तथा बैचारिक नेतालाई जानकारी र सचेतना बढाउने खालका तालिमहरु सञ्चालन गरिनु पर्ने ।
 सहकारी शिक्षाका लागि निश्चित रकम छुट्याउनु पर्ने ।
६) सहकारीहरु बीच पारस्परिक सहयोग (Cooperation among Cooperatives)
सहकारी संस्थाहरुले प्रभावकारी रुपमा आफ्ना सदस्यहरुलाई सेवा पु¥याई स्थानीय, राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्रााष्ट्रिय संरचनाहरु बनाई आपसमा मिलेर सहकारी आन्दोलन लाई सुदृढ गर्दछन । सहकारीका सदस्यहरु बीचको सहकार्य गर्ने बातावरण बनाई एक आपसमा सहयोग समेत आदन प्रदान गर्दछन ।
 समान स्तरका सहकारी संस्था र संगठन भित्रका जिल्ला स्तरिय तथा केन्द्रिय संघहरु संग ठाडो र ते¥स्रो सहयोग र सम्बन्ध विकास र विस्तार गर्नुपर्ने ।
 मिल्दो जुल्दो ब्यवसाय गर्ने सहकारी संस्थाबीच ब्यवसायिक सहयोग र सम्बन्ध तथा सञ्जाल निर्माण गरी निरन्तर तथा प्रभावकारी समन्वय गरिनु पर्ने ।
 सहकारी संस्थाहरु बीच विषयगत समानताका आधारमा आर्थिक सहयोग आदन प्रदान गर्ने ।
 निशुल्क वा सशुल्क प्राविधिक परामर्श र सहयोग जारी राख्नु पर्ने ।
 प्रतिस्पर्धालाई परस्पर सहयोग मार्फत सहअस्तित्व र सामुहिक भलाईको रुपमा उपयोग गरिनु पर्ने ।
 अन्य सहकारी संघ संस्थाहरु संगको सहयोगको ढाँचा विस्तार गरिनु पर्ने ।
 सहकारी वजार सूचनाको आदना प्रदान र सोको प्रणाली विकास गर्ने ।
७) समुदाय प्रति चासो (Concern for Cooperative)
सहकारी संस्थाहरुले आफ्नो संस्थाको निर्धारित नीतिको आधारमा आफ्ना सदस्यहरुको दिगो विकासका लागि कार्यहरु गर्दछन । समुदायको विकास र वातावरणीय पक्षमा सचेत भई सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा गर्दछन ।
 सन् १९९५ को महासभाबाट थपिएको सिद्धान्त
 सहकारीहरु समुदायमा स्थापित भएका हुन्छन तसर्थ सहकारीहरुले समुदायHereको आवश्यकतामा ध्यान पु¥याउनु पर्दछ ।
 सहकारी ब्यवसायबाट भएको नाफाको हिस्सावाट । वा मानविय शक्ति परिचालन तथा अन्य स्वीकार्य विधिहरुबाट सम्पन्न हुन्छन ।
 सहकारी संस्थाहरु सदस्यको आर्थिक तथा सामाजिक हितमा जिम्मेबार हुनु पर्ने ।
 पिछडिएको समुदायलाई सहकारीताको शिक्षा दिई आत्मनिर्भर बनाउने तर्फ कार्य गर्नु पर्छ ।
 सदस्यका हितका खातिर वातावरण संरक्षण तथा अन्य प्रकृतिक स्रोत संरक्षण शिक्षाको प्रचार प्रसार, दिगो विकास आदि गैर ब्यवसायिक क्रियाकलापमा सम्लग्न हुन सकिने ।
 सामाजिक पूर्वाधारको विकासमा जोड दिने ।
 स्थानीय श्रोत साधनको विकास, उपयोग एवम् सम्वर्धनमा ध्यान दिने ।
 समुदाय प्रतिको सरोकार कुन हद सम्म राख्नेमा सचेत हुने,किन कि सदस्यहरुको भलाईबाट नै समुदाय प्रतिको दायितव पनि निर्बाह भै रहेको हुन्छ । साथै सदस्यहरुको हित विना संस्थाको अस्तित्वनै संकटमा पर्दछ ।
 सहकारीको हितमा ध्यान दिदै समुदायको हितमा कार्यहरु गर्ने ।
सहकारी र अन्य ब्यवसाय बीचको फरक
सहकारी संस्था एउटा सामुदायिक ब्यवसायिक संस्था हो । सहकारी व्यवसाय र अन्य ब्यवसायको वारेमा जानकारी पाउन समग्र ब्यवसायको अध्ययन गर्न जरुरी छ । जस अनुसार सहकारी र अन्य ब्यवसाय बीचको फरक निम्नानुसार छ ।
Copyright © 2017 Lalitpur DCUL